TTSweet: အန်တီဆွိနဲ့ အိမ်ရှင် အိမ်ငှါး ဒရမ်မာ (၂)...
Mon Petit Avatar April 13, 2011 at 11:57 AM
Thank god, it all turn out to be good and thank you Ma Ma Sweet for sharing this experience!!!
ဖိုးတုတ် April 13, 2011 at 12:28 PM
ဟူး.... အခန်းဆက်သိုင်းဝထ္ထုလို အကြာကြီးများဖတ်ရမလားလို.
အဆင်ပြေသွားတာဖတ်လိုက်ရလို. ၀မ်းသာပါတယ် ၊
သြဇီက အိမ်အသစ်အကြောင်းနဲ. တစ်ခြားဗဟုသုတတွေကို မျှော်နေပါ့မယ် ...
တစ်ချို.ဘလော့ဂါတွေလို တစ်နေ. ပို.စ်တစ်ပုဒ်နှုန်းနဲ.တင်နော် ...
Hello, အန်တီ sweet,
Glad to hear that, now settle everything.
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! April 13, 2011 at 4:19 PM
မမရေ အဆင်ပြေသွားတာ သိရလို့ ဝမ်းသာ ရပါတယ်။ မင်္ဂလာ ရှိသော နှစ်သစ်လေး ဖြစ်ပါစေ မမ။ ရောက်တုန်းလေး ရေးလောင်းသွားတယ်နော်မမ ဗွမ်းးးးးး :):):)
ဝက်ဝံလေး April 13, 2011 at 5:30 PM
ဟူးးးးး ခုမှပဲ ပြီးသွားတော့တယ်
စော(အဝါရောင်မြေ) April 13, 2011 at 7:15 PM
အိမ်ငှား အဆင်ပြေ သွားပြီမို့ လား
``ဗွမ်း`` ဟဲဟဲ သင်္ကြန်ရေလောင်းတာ စိတ်ဆိုးနဲ့အမကြီးရာ
မယ့်ကိုး April 14, 2011 at 12:23 AM
မမနဲ့ အတူ ဟင်း ချပြီး ရင်အေးသွားပါတယ်း)
T T Sweet April 14, 2011 at 12:40 AM
ကိုဇက် အမှန်က ပထမပိုင်းလိုအရမ်းရှည်သွားမှာစိုးလို့ ချုံ့ရေးလိုက်တာ။ မရေးပဲ ချန်ခဲ့တာတွေလဲ အများကြီးပဲ။ အစ်မ အွန်လိုင်း အိမ်ကြော်ငြာတဲ့ web site တွေကနေ ကိုယ်တိုင်ကြော်ငြာတာတို့၊ အဲဒီက ပွဲစားတွေနဲ့ ဆက်သွယ်တာတို့၊ အင်တာနက်က အိမ်ကြော်ငြာကိုတွေ့ပြီး ပွဲစားမပါပဲ အိမ်လာကြည့်တဲ့ ဖိလစ်ပင်းမလေးတွေ တစ်သိုက်အကြောင်း၊ ဘလော့ဂ်လာဖတ်သူ ညီမတစ်ယောက်ကနေ မိတ်ဆက်ပေးလို့ မြန်မာ အင်ဂျင်နီယာ လင်မယား၊ ခလေးငယ်လေးနဲ့ အိမ်လာကြည့်တာတွေ၊ ပန်တို့လင်မယား အချိန်ဆွဲတာတွေ၊ ရစ်တာတွေ အားလုံး ချန်ထားခဲ့ပါတယ်။ တကယ်ရေးမယ်ဆို ၃ပို့စ်လောက် ဆက်ရေးလို့ရတယ်။ ဖတ်တဲ့သူတွေ အားနာလို့ အတိ်ုချုံ့ပဲ ရေးလိုက်တာပါ။
မယ်ကိုး၊ ၀က်ကလေး၊ စော၊ အိမ်ဂျယ်လှိုင်၊ အနောနိမတ်စ်၊ မွန်ပြည်သစ် ကိုယ်ချင်းစာ ခံစားသွားသူ အားလုံး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Hello Aunty Sweet,
Glad to hear that all are settled now.
May I have the name and contact of the myanmar agent you hired?
T T Sweet April 16, 2011 at 2:04 AM
Yes, they are not bad. Can u send me your email address. I prefer to send by email. Thanks
rose of sharon April 24, 2011 at 3:24 PM